အခမဲ့ Helios EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့ Helios EA ၏
အခမဲ့ Helios EA ၏
Helios တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး စျေးနှုန်းအချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Helios EA ၏?
4 နှင့် 5-ဂဏန်းကိုးကားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အကွိမျမြားစှာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု profile များကို။
တစ်ဦး fixed တွေအများကြီးကုန်သွယ်မှု option ။
artificial ထောက်လှမ်းရေးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ data တွေကို process လုပ်တယ်။
အနည်းငယ် input ကို parameters တွေကို။
configure နှင့်ပိုကောင်းအောင်ရန်မလိုအပ် - မျိုးဗီဇ algorithm ကိုပြီးသားသင်တို့အဘို့ပွုခဲ့သညျ။
အခမဲ့ Helios EA ၏ - ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့?
ကပ် Helios ယင်းနှင့်အတူ6ဇယားမှ M15 အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ချက်: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD.
စွန့်စားမှု, ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် slippage ပြုပြင်မည်။
Helios EA ၏ - Input အား parameters တွေကို
စွန့်စားမှု - အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပရိုဖိုင်း။
fix တွေအများကြီး - အတည်သတ်မှတ်ထားတဲ့အများကြီးအရွယ်အစား။ ကို "setting တဲ့အခါမှသာအလုပ်ဖြစ်တယ်fix တွေအများကြီး " အတွက်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် စွန့်စားမှု.
မက်စ်ပြန့်နှံ့ - အမြင့်ဆုံးသဘောတူညီချက်မဖွင့်ဘို့အပြန့်ပွားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သင့်လက်ရှိပြန့်ပွားကဤတန်ဖိုးကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ဆိုပါက, အမိန့်ကိုစလှေတျမည်မဟုတ်ပါ။
မက်စ် slippage - အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုခဲ့ slippage ။
Helios EA ၏ - ကွဲပြားခြားနားသောစွန့်စားမှု profile များကိုအကြားခြားနားချက်
အရောင်းအများ၏အရေအတွက်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်မူတည်ပါဘူး, ကသာ volumes ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုကွဲပြားခြားနားသောနိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် 1000 0.01 အထိရူးသွပ်သို့မဟုတ် Fix တွေအများကြီး (30) အတွက်တစ်ဦး 000 ၏သိုက်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသိုက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ကိုသုံးပါ။
အလတ်စားအထက်တွင် profiles တိုးချဲ့အန္တရာယ်များနှင့်အတူ profile များကိုဖြစ်ကြသည်။ ကသတိထားပါနှင့်အမြတ်အစွန်း၏အစိတ်အပိုင်း reverse ။
Helios EA ၏အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် - အရေးကြီး
Helios Devicore မှအလားတူအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်အစုံအမြတ်အစွန်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုကျဆင်းနေစဉ်အမြတ်အစွန်းတိုးပွါးသောဆုံးရှုံးမှု Stop နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကွာအဝေးမှာအမြတ်ကိုယူပါ။
သတိထားပါ အလတ်စားအထက်ပါအန္တရာယ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ! အဆိုပါ EA ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်အဆင့်ဆင့်မှာအမြတ်အစွန်းကောင်းလာတာပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်မှာသိုက်တတ်၏။
အဆိုပါ EA ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံသည်, ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုသာ (အမြောက်အများ၏တရားအရ) အပေးအယူ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကအတူသီအိုရီရလဒ်များကိုချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ EA ၏တစ်လတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းဆောင်ကြဉ်းနှင့်လာမည့်လတွင်အကြီးအမြတ် generate လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အရောင်းအများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ဝင်ငွေမျိုးစုံနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပြိုင်နက်6ငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
Helios တစ်ပတ်ကိုတဦးတည်းငွေကြေးတစ်စုံအပေါ် 1-3 အပေးအယူဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါ EA ၏အဆိုပါအပေးအယူ modify မဆိုင်းငံ့အမိန့်ကိုနေရာမပေးပါဘူး, ဒါကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
သင့်အကောင့်စောင်ရန်းကိုထောက်ခံပါတယ်သေချာပါစေ။ အဆိုပါ EA ၏မဟာဗျူဟာ hedging အပေါ်အခြေခံပြီးသည်မဟုတ်, ကတဦးတည်းငွေကြေးတစ်စုံအပေါ်မျိုးစုံလွတ်လပ်သောအလို့ငှာစုပြုံနိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့ Helios EA ၏ Download
Helios EA ၏အခမဲ့